काठेखोलालाई स्मार्ट गाउँपालिकाको रुपमा विकास गर्न अग्रसर छौँः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्की (भिडियो ) | KhabarWay.com Nepali News
काठेखोलालाई स्मार्ट गाउँपालिकाको रुपमा विकास गर्न अग्रसर छौँः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्की (भिडियो )
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार २०:१७
गण्डकी प्रदेश अन्तरगत बागलुङ जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्येको काठेखोला गाउँपालिका साविकका ८ गा.वि.स (पाला १–५) सिगाना (६) भीमापोखरा, धम्जा, तंग्राम, बिहुँकोट, रेश र लेखानी मिलेर ८ वटा वडाको एउटा गाउँपालिका बनेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग यस गाउँपालिकाको मध्य भागबाट गएको र बागलुङ जिल्लाको सदरमुकामबाट पनि नजिक छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले चिरिएको यस पालिकको विकास निर्माणलाई राष्ट्रिय राजमार्ग सहयोगी बन्ने छ । जिल्ला सदरमुकामदेखि नजिक भएपनि विकास निर्माणको दृष्टिले अलि विकट लाग्ने ग¥यो । स्थानीय तह सञ्चालनमा आए पछि अहिले गाउँपालिका भित्र विकास निर्माणले गति लिएका छन् । सेवा प्रवाह जनमैत्री तथा प्रविधियुक्त भएका छन् । गाउँपालिका भित्र के कस्ता सुधारका काम भएका छन भन्ने विषयमा काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्ण बहादुर कार्कीसँग खबरवे अनलाईनका सहसम्पादक अर्जुन कार्कीले गरेको कुराकानी ।
१) यहाँलाई काठेखोला विशेष संवादमा हार्दिक स्वागत छ ।
२. तपाई काठेखोला गाउँपालिकामा आएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यभार सम्हालेको आठ महिना बढी भयो । यो अवधिमा भएको सुधारात्मक कामको स्मरण गर्दा ?
– काठेखोला गाउँपालिकामा म भदौंको मध्य तिर आएको थिए । कार्यभार सम्हाले पछि उपलब्धी मुलक कार्यक्रम लगेको छु भन्ने लाग्छ । मुख्य गरेर काठेखोला गाउँपालिकालाई एउटा सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन सबैभन्दा पहिले योजनालाई अनलाईन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्यौ । लेखा व्यवस्थालाई सूत्रमा आधारित लेखा प्रणालीमा विकास गर्यौ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण काठेखोलाका आठ वटै वडालाई डिजिटल गाउँपालिकाको रुपमा रुपान्तरण गर्न हामी डिजिटल प्रोफाइल बनाई रहेका छौँ । उक्त काम अन्तिम चरणमा छ । सेवाप्रदायक कम्पनीले हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । त्यस्तै व्यक्तिगत घटना दर्तालाई डिजिटाइलेसन गर्ने कामको पनि हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि अनलाईन सिस्टममा चलिरहेको छ ।
शिक्षक दरबन्दी लामो समयदेखि २०७६ माघ १२ गतेको कार्यविधिले व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यो व्यवस्थापन पछाडीको अवस्थालाई अहिले आएपछि सहज रुपमा मर्का नपर्ने गरी शिक्षकदरबन्दी मिलन कार्यपनि सम्पन्न गरिसकेका छौं । कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सरल, चुस्त र सुदुढिकरण बनाएर लागेका छौँ । समग्रमा हेर्दा २/४ वटा कुराहरु नयाँ थालनी भएको मलाई महशुस भएको छ ।
२. गाउँ पालिकाको सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन नमुना अभ्यास के गर्नुभएको छ ।
– मैले अगाडी पनि भनिसकेको छु । काठेखोला गाउँपालिका अहिले सफ्टवयरमा चलिरहेको छ । लेखा, आर्थिक प्रशासन, योजना सफट्वयर मार्फत चलिरहेको छ । त्यस्तै प्रत्येक वडामा हामीले अनलाईन सिस्टम मार्फत काम गरिरहेका छौं । व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाईनमा नै छ । हामीले रसिद काट्दैनौं । अनलाईनमा नै रसिद काट्छौं । त्यसले चुहावट हुने सम्भावना हुँदैन । कुन वडामा कति आम्दानी भयो भन्ने कुरा तुरुन्तै हेर्ना सकिन्छ ।
आम जनसमुदायले कसरी सेवा प्राप्त गर्ने त भनेर गाउँपालिकामा डिजिटाइलेसनमै एउटा सूचना टाँसेको छौं । प्रत्येक वडामा त्यो सूचना टाँसिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचनाहरु प्रवाह गरेका छौं । अनुगमन मुल्यांकनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाएका छौं । हाम्रो जुन सेवा प्रवाह हो त्यो सबै जानकारीको लागि सहज रुपमा अगाडी लगेका छौं । हामी काठेखोला गाउँपालिका प्रविधि मैत्री र सबैले जानकारी पाउने हिसाबले गैरहेको छ । त्यसको अतिरिक्त हामी मिडियामार्फत त्यो छापामा होस् अथवा विद्युतीय होस् त्यस त्यसलाई पनि हामीले प्रत्येक हप्ता आमनागरिकले जानकारी पाउन भन्ने हेतुले त्यसमा पनि सम्झौता गरेर रकम विनियोजन गरी त्यसमार्फत पनि हामीले जानकारी सवै कुराहरु काठेखोला गाउँपालिकाको गतिविधि जानकारी गराउने काम गरेका छौं ।
३. चालु आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?
– बार्षिक कार्यक्रम, अध्यक्ष ज्यू मार्फत तत्काल निर्णय गर्ने भनेर राखेका केहि योजनाहरु र पूर्वाधारका योजना गरी हामीसँग झन्डै ३ सयका हाराहारीका योजना छन । अहिलेको अवस्थामा ७५ प्रतिशत योजनाहरु हामीसँग सम्झौता गरिसकेको अवस्था छ । चैत ९ गतेसम्मको डाटा हेर्दा पनि २ सय २७ वटा योजनाहरु सम्झौता भइसकेको अवस्था छ । ९८ योजनाहरुले अन्तिम भूक्तानी गरेको अवस्थ हो ।
हामी प्रदेश सरकार र संघिय सरकारबाट आएका योजनाहरु छन् तिनलाई हामीले द्रुत गतिमा अगाडी बढाएका छौं । ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडी गइसकेका योजनाहरु पनि काम भएको छ । भीमापोखराको यसै वर्ष टेन्डर गरिएको योजनाको २५, प्रतिशत काम भएको छ त्यसलाई हामीले पहिलो रनिङ विल भुक्तानी दिइसकेका छौं । यस्तै तंग्राम–धम्जा हिले सडकको पनि हामीले रनिङ विल भुक्तानी दिने तयारीमा छौं । उक्त योजनाको काम पनि २० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । गत वर्ष ठेक्कामा गएको रेशको सडकको पनि यस वर्ष ३५ प्रतिशत भन्दा बढी काम भएको छ । यस्तै गाउँपालिकाबाट रेश जाने अघिल्लो वर्षको बजेट बाँकी रहेर बन्द भएको सडकको कालोपत्रे गर्ने काम भएको छ । त्यसलाई पैसा मागेर भुक्तानी दिइसकेको अवस्था छ यसै वर्ष । यसरी हेर्दा योजना तथा कार्यक्रमहरु द्रुत गतिमा अगाडी बढेका छन् । यसको अलवा हामीसँग बजेट छुटाएका कार्यक्रमहरु अर्नेसका कार्यक्रमहरु द्रुत गतिमा अगाडी बढी रहेको छ । हामी ति कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने केहि दिन पहिले विज्ञ लिएर लेखन सिप सम्बन्धी कार्यक्रम गरेका थियौं । यसरी सहज रुपमा योजनाहरु एकदम अगाडी छ । मैले यहि अवस्थामा भन्नु पर्दा जेठ मसान्त भित्र काठेखोला गाउँपालिकाका योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन्छन् भन्ने अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँदछु ।
४. सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंक जान कठिन भएको गुनासो छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ ?
– म त्यहाँ बसिरहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गुनासो आए जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने सवै वडामा बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने पहिलो काठेखोला गाउँपालिका हो । किनत भन्दा तीन वर्ष अगाडीबाट बैंकिङ्ग सिस्टममै उसले काम गरिरहेको थियो । त्यसमा पनि हामीले सहज रुपमा अक्षेतेमा रहेको ग्रिन बैंकले वडा नम्बर १, ४, ५ र ८ को अक्षेतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ । त्यस्तै अक्षेतेमा रहेको सेञ्चुरी बैैंकले वडा नम्बर ६ को भत्ता वितरण गर्छ । यस्तै वडा नम्बर २ मा सिटिजन बैंकले शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवामार्फत घरमै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्छ । म आफै आएपछि सम्झौता गरेको हो । माछापुच्छ«े बैंकले शाखा रहित बैंक सेवा मार्फत वडा नम्बर ७ मा घरमै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्छ । एनआइसि एसिया बैंकले भत्ता वितरण गरिरहेको वडा नम्बर ३ मा केहि समस्या भएको देखिरहेका छौं । त्यसलाई पनि हामीले केहि मोडिफाइ गर्ने तयारीमा छौं । यति धेरै भत्ता पाउने आमाबुबा हुनुहुन्छ उहाँहरुसँगबाट त्यति गुनासो आएजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यहि पनि वडा नम्बर ३ मा समस्या भइरहेको छकी भन्ने हो । त्यो हिसावले गर्दा खेरि समस्या छ जस्तो लाग्नैन एउटा पक्ष । दोस्रो कुरा के भने यसलाई अनलाईन सिस्टममै छ । सामाजिक सुरक्षाको समस्या छैन । अक्षेते गाउँपालिकाको विच सेन्टर हो । दुई ओटा शाखारहित बैंकले सेवा दिइरहेको छ भने एउटा वडा नम्बर ३ मा मात्र समस्या देखिएको हो ।
५. गाउँपालिकाको भवन निर्माणको विषय किन अन्यौल भएको हो ? जग्गा अभावको केन्द्र विवाद ?
– गाउँपालिकाको भवनको लागि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधि ज्यूहरु पनि सकरात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ । त्यसमा गाउँपालिकाको भवन बनाउनको लागि, जग्गा खरिद गर्नको लागि यस भन्दा पहिले पनि पटक, पटक प्रक्रिया अगाडी बढाइरहेको अवस्था निरन्तर रहेको छ । विचमा गत वर्ष चैतमा भिमसेन प्राविको भवनलाई प्रयोग गर्न दिन सक्छौं भन्ने किसिमका कुरा त्यहाँ उठिरहेको र भीमसेन प्रावि मर्ज भएर भीमसेन माविमा गइसके पछाडी अहिले गाउँपालिकाको भवन त्यो ठाउँमा लगेर संचालन गर्ने भन्ने किसिमका कुराहरु भइरहेका छन् । त्यसमा आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न केहि समय लाग्ने भएको हुनाले र त्यहाँका सवै राजनीति प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले पनि सुल्डाँडा वरिपरिनै केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेको हुनाले छिट्टै यो प्रस्ताव आउने छ । एक÷दुई वर्षको लागि राम्रो मेन्टेनेस गर्यो भने राम्रोसँग बस्न सक्ने भीमसने प्राविको भवन छ उहाँहरु त्यसमा दिन सहमति भइसकेको अवस्था छ ।
६. उपभोक्ता समितिमार्फत हुन कामको सहजिकरण कसरी गर्नुभएको छ ।
– मलाई उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको फरफारक गर्दा धेरै दुःख पाएको गुनासो सुन्नमा आएको भन्ने लाग्दैन । म गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा गइसके पछाडी नै अध्यक्ष ज्यूसँग सल्लाह गरेर सफट्वेयरमार्फत हामी योजना पनि चलाउनु पछ्र्र भनेर सुरुवात गरेका थियौं । सफ्टवेयरमार्फत सुरुवात भइसके पछाडी सुरुमा उपभोक्ता समितिमा अफ्ठ्यारो पर्र्यो । किनभने कुनै एक व्यक्ति कुनै एक समितिमा बसिरहेको व्यक्ति अर्को उपभोक्ता समितिमा बस्यो भने सम्झौता हुँदैन्थ्यो । त्यो हिसावले त्यति खेर सुरुमा केहि अफ्ठ्यारो महशुस भएको हो । । जुन योजना सञ्चालन गर्ने काममा काठेखोला गाउँपालिका यति सहज रुपमा संचालन गरेको छ । यहाँहरुलाई मैले के उदाहरण देऊ भने हामीसँग प्राविधिकहरु पाँच जना छन । चार जना प्राविधिकहरुलाई असोजमा मिटिङ राखेर प्रत्येक दुई वटा वडाहरु हेर्नुहोस् भनेर स्टिमेन्ट मुल्यांकनको लागि छुटायौं । त्यसको अतिरिक्त हाम्रो इन्जिनियर आफै लाग्नुहुन्छ । उहाँहरुले स्टिमेन्ट मुल्यांकन गर्ने कुरामा मलाई नसोधि जानुहोस् भनेर मैले भनेको छु । कुनै पनि दुःख नहोस् भनेर आफै जानुहुन्छ र म यहाँ छु भनेर जानकारी गराउनुहुन्छ ।
दोस्रो कुरो कुनै दिन अहिलेसम्म त्यहाँ योजना सम्झौता भएन भनेर फर्केर गएको अवस्था छैन । म आफु त्यहाँ गइसके पछाडी प्रत्येक शाखामा अधिकृत लेबलको कर्मचारीहरुले आफै सहि गरिदिनुहोस् मसँग लाईन ल्याउनु पर्दैन भनेको छु । मैले चिठ्ठिमा तोक लगाएर पठाए भने उहाँहरु त्यहिबाट जानुहुन्छ । त्यस्तो गुनासो छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन योजनामा । भुक्तानी दिने कुरा पनि आर्थिक प्रशासन शाखा पनि यति क्रिएटिभ छ, यति चलायमान छ उसले त्यहाँ भएको दुई मिनेट पनि भुक्तानी रोक्दैन । काठेखोला गाउँपालिकामा गुनासो कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन । कुनै मान्छे डकुमेन्ट मिलाएर ल्याएको छ भने मैले पाइन भन्ने अवस्था छैन ।
७. जातिय छुवाछुत न्युनिकरणको लागि गाउँपालिकाले हाम्रा चुला सबैलाई खुला भन्ने नीति भएको थियो । यो विषयमा केही कार्यक्रम र अभियान भएकी ।
– विशेषतः यसमा हामीसँग नीति तथा कार्यक्रम आयो र बजेटको व्यवस्थापन नभएको अवस्था र त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानको लागि बर्तमान अवस्थामा अलिकति कठिन छ । कोभिडको कुराहरुले पनि कठिन पारेको हो । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो पाटोलाई अन्य जातीहरुको भन्दा पनि विशेषत दलित वर्गको । तिनीहरुलाई नै पहिले सचेतना मुलक कार्यक्रमहरु दिनुपर्छ, सचेत र सशक्तिकरण गराउनुपर्छ भन्ने हिसावले उनीहरुलाई हामी विशेषत जातीय वर्गलाई नटुटाउने । जातीय विभेद राख्नुहुँदैन भन्ने हिसावले अगाडी लिएर गइरहेका छौं । दलित वर्गलाई सचेतना मुलक कार्यक्रमरु दिने क्रममा विशेष गरी उनीहरुलाई हरेक क्षेत्रमा अल्ली माथि उठाउनेकी भन्ने हिसावले कार्यक्रम संचालन गर्यौ । यसको अतिरिक्त यस वर्ष ठूलै रकमबाट उनीहरुलाई आय आर्जनको लागि बाख्रा वितरण पनि गरेका छौँ । । यस वर्ष उनीहरुको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने अभिप्रायले ्रस्स्प्रत्येक वडामा बजेट विनियोजन गरेर उनीहरुको आम्दानीको स्रोत बाजालाई पनि अनुदान दिने भनेका छौं । देखिने हिसावले नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो ‘हाम्रा चुला, सवैलाई खुल्ला’ भन्ने त्यो अलीकति नीतिगत रुपमा हामी जुन ढंगले लानुपर्यो अल्ली अगाडी बढिरहेको अवस्था छ्रैन ।
८. तपाईको बिशेष जिम्मेवारी हुने आर्थिक पारदर्शीता र सुशासन कायम राख्ने सवालमा के–कस्ता प्रयासहरु गर्नुभएको छ ?
– आर्थिक पाटोको विषयलाई हेर्ने हो भने सवै भन्दा पहिले त डिजिटल प्रोफाइल, डिजिटाजेसन र अनलाईन सिस्टम, सुत्रमा आधारित लेखा प्रणाली हामीसँग छ । अनलाइन सिस्टममा रहेको सुत्रमा आधारित लेखा प्रणाली भएको कारणले आज यसबाट खर्च गरौं । यो शिर्षकबाट खर्च गरौं भनेर मान्ने वाला नै छैन र हुँदैन पनि । आज भरखर वडा नम्बर १ देखि ८ सम्मले नै कति आम्दानी गर्यो भनेर अनलाईनबाट हेर्ना सकिन्छ । त्यसैले हामीले विल काट्दैनौं । अनलाईनमै रसिद काट्छौं र उहाँहरुलाई दिन्छौं । यस्तै हामीसँग सार्वजनिक छ । हामीलाई सूचना माग्न आउनेहरुलाई वेभसाइटमार्फत जानकारी दिन्छौं । हामीसँग सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ कसैलेले सूचना माग्न आएमा तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । आर्थिक पारदर्शीता योजनाको हकमा केहि हुन्छ की भन्ने लाग्ने भएकोले हाम्रा प्राविधिक साथीहरु हरेक समय योजनामै पुगेर मुल्यांकन र स्टिमेन्ट गर्नुहुन्छ । जस्तै १ लाखको योजना थियो १० प्रतिशत श्रमदान भएपनि ९० प्रतिशत मात्र काम गरेमा प्राविधिकहरुे ९० हजारको मात्र काम भयो है भनेर जानकारी गराउनुहुन्छ र ९० हजार मात्र भुक्तानी दिन्छौं । योजना भित्रै अनुगमन समिति छ । त्यसले अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । काम सम्पन्न भएपछि उपभोक्ताहरुलाई राखेर खर्च सार्वजनिक गरेको बिल उपलब्ध भएन भने हामी त्यसलाई भुक्तानी दिदैनौं । किनकी काम सम्पन्न भएपछि खर्च विवरण उपभोक्ताहरुले थाहा पाएको हुनुपर्छ । ५ लाख भन्दा बढीको योजनाको हकमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा अनुगमन समिति छ त्यसले अनुगमन गरेपछि मात्र भुक्तानी गरिन्छ ।
९. काठेखोला गाउँपालिकामा एक वडा एक पहिचान कार्यक्रम रहेको छ ? त्यसको काम के भइरहेको छ ।
– हामीसँग कतिपयले फलफूलका कार्यक्रम, तरकारी खेती, धानको पकेट क्षेत्रमा रुपमा विकास, आलु क्षेत्रमा र चियाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्नेहो भने वडा नम्बर ६ विहुँको सुन्तला खेती जिल्लामा मात्र नभई बाहिर पनि उत्कृष्ट नमुनाको रुपमा चिनिएको छ । वडा नम्बर ३ धम्जामा आलु खेतीलाई हेर्दा धेरै नमुनाको रुपमा अगाडी बढेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ७ रेशमा धानको पकेट क्षेत्र र चिया खेती राम्रो भइरहेको छ त्यसलाई हेर्ना सकिन्छ । वडा नम्बर १ पाला र ८ लेखानीमा तरकारी खेती, वडा नम्बर २ र ५ मा पर्यटनको क्षेत्रमा काम भइरहेको छभने वडा नम्बर ४ तंग्राममा जनजाती संग्राहलयको काम भइरहेको छ । यसरी समानन्तर रुपमा काठेखोलाले पहिचान दिइरहेको अवस्था छ ।
१०. गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतको अवस्था कस्तो छ ?
– हामीसँग संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाको आन्तरिक गरी ५० करोड २ लाख बार्षिक बजेटको लक्ष्य थियो । अहिले त्यसमा बृद्धि भएको छ । राजश्वको हकमा चैत ९ गतेसम्म २४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व जम्मा भएको छ । यसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक स्रोत पनि लक्ष्यभन्दा पनि बढि जान्छ भन्ने छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा असार मसान्तसम्म ५० करोड २ लाख बार्षिक बजेट हुने लक्ष्य लिएपनि चैत महिनामा नै लक्ष्य बढि गइसकेको छ ।
११. अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
– यहाँहरुको पत्रिकामार्फत काठेखोला गाउँपालिकाको सम्पूर्ण पक्षको जानकारी दिने अवसर दिनुभएकोमा जननिगरानी साप्ताहिक पत्रिकालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । गाउँपालिकाले गरेका कामहरुको बारेमा मैले जानकारी गराएको कुराहरु गाउँपालिका बासीहरुमा पुराइदिनुहुनेछ र त्यसको अन्य ठाउँमा पनि जाने छ । अहिले महत्वपूर्ण अवस्था भनेको डिजिटल प्रोफाइल हो । काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर बहादुर थापा र जनप्रतिनिधिहरुको देखिने अवसर हो । गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल बनाउने जिम्मा पाएको कम्पनीले केहि दिनमा गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछ । डिजिटल प्रोफाइल सार्वजनिक गरेपनि जुनकुनै ठाउँबाट काठेखोला गाउँपालिकाको कुन स्थानमा बस्ती छ । मेरो घर कुन हो । बाटो कस्तो छ भनेर सवैले जानकारी पाउने छन् ।